BluffTitler: Ngwá Ọrụ iji mee Intros nke vidiyo gị | Akụkọ akụrụngwa
BluffTitler: Mee Intros maka vidiyo gị ngwa ngwa
Hụla vidiyo mmeghe ndị mgbasa ozi telivishọn jiri? Enwere ike igosipụta nke a tupu ekwupụta ozi ọma ma ọ bụ mgbe mmemme maka ndị na-ege ntị ga-amalite, nke enwere ike ịme na ngwa animation 3D yana sọftụwia edezi na-enweghị usoro; Ime otu n'ime ọrụ ndị a na-anọchite anya ịkwụ nnukwu ego ma ọ bụ nwee opekata mpe ihe ọmụma iji mee ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọmụma ma ọ bụ akụnụba iji nwee ike inwe otu vidiyo vidio mmeghe a, anyị na-akwado iji «BluffTitler» nke na-eme ka ihe dịrị ndị ọrụ ya niile mfe. animations na-emecha kọwara na ebe anyi kwesiri ide ederede ma obu tinye logo.
Ihe ngosi emere na BluffTitler
Dị ka onye nrụpụta ngwa ọrụ a siri kwuo, ịme vidiyo mmeghe na ntinye gị bụ otu n'ime ọrụ dị mfe ma dị mfe iji rụọ. Ihe niile anyị kwesịrị ime bụ ibudata ụdị ngosi (yana obere oge iji ya) na mgbe e mesịrị, ịnyagharịa site na dị iche iche animations dị na interface gị. Ebe ọ bụ na ị ga-ebudata ụdị ngosi, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ga-anọ ebe ahụ, nke a ga-agbasawanye mgbe ị kwụrụ ụgwọ maka ikikere dị iche iche. Onye ọrụ ahụ ga-ede ederede ma ọ bụ ozi ha chọrọ igosi na mmegharị ndị a, agbanyeghị na enwere ike iji akara ngosi ma ọ bụrụ na ọ dị n'aka.
«BluffTitler»Ọ bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị na-arụ ọrụ dị iche iche nke ọdịyo ọdịyo dị ka ihe nkiri eserese, nkuzi vidio na maka ngosi nke ụlọ ọrụ na ọrụ gị. Ọ bụrụ n’ịtụle na otu n’ime vidiyo ndị a n’ahịa nwere ike ịnwe uru karịrị euro 300, ịkwụ ụgwọ maka ikikere iji ya bụ ihe ga-adaba adaba ebe ọ bụ na ọ na-anọchite anya 10% nke uru ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » BluffTitler: Mee Intros maka vidiyo gị ngwa ngwa
Samsung Galaxy S6 Edge Vs LG G4, duel na elu nke njedebe dị elu